စီးပွား/ကူးသန်း ဌာနများ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမည် | ဧရာဝတီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| November 2, 2012 | Hits:1
| | ပြည်တွင်း ဈေးကွက်သို့ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်မှ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသည့် စားသုံးဆီများ၊ အရက်တု၊ ကြက်ဥ အတုအပါအ၀င် စားသောက်ကုန်နှင့် ကုန်စည်များစွာ ၀င်ရောက်လျက် ရှိသည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဧရာဝတီသတင်းဌာနတို့ အောက်တိုဘာလအတွင်းက တွေ့ဆုံစဉ် ၀န်ကြီးဦးဝင်းမြင့်က အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုင်ရာစာတမ်းတစ်စောင်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ယင်းစာတမ်းတွင် ၀န်ကြီးဌာန၏ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို တရားဝင်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
“ကုန်သွယ်ရေး ပေါ်လစီတွေအမြန်ထွက်ဖို့ ကျနော်တို့ ဆွဲနေပြီ။ ဒီစာတမ်းမှာပါတွေက အစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတာနဲ့ စတင်လုပ်ဆောင်တော့မှာပါ” ဟု ဦးဝင်းမြင့်က ဧရာဝတီသို့ ရှင်းပြသည်။
လတ်တလော စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ၀န်ကြီးရုံး၊ ကုန်သွယ်မှု ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာ ထွက်ကုန် ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဟူ၍ ဌာနလေးခုရှိပြီး ယင်းတို့အနက်မှ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနဟူသော အမည်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးရာ ဦးစီးဌာန အမည်သစ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ လယ်ယာ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ဌာနဟူသော အမည်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး ဦးစီးဌာနဟူ၍ လည်းကောင်း အမည်သစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်ဌာနနှစ်ခုကို အမည်မပြောင်းလဲသော်လည်း ဌာနလေးခု စလုံးတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့် ဌာနများတွင် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးရာဦးစီးဌာန ပါဝင် လာခြင်း ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းအတုနှင့် အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော စားသောက်ကုန်နှင့် ကုန်စည်များ မ၀င်ရောက်နိုင်ရေး အဓိက ကာကွယ်တားဆီးနိုင်တော့မည်ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိတဦးက ရှင်းပြသည်။
“ဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတွေက နောက်လာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ စမယ်လို့သိထားပါတယ်။ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးရာဦးစီးဌာန ပါလာတာကတော့ အတော်ထူးခြားပါတယ်။ ဒီဌာနက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဆေးဝါးနဲ့အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးဌာန(FDA) နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်ဆေးရေးတွေ လုပ်သွားရမှာပါ။ ပြည်သူ့အသက်တွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကုန်စည်တွေကို ဈေးကွက်မ၀င်လာနိုင်အောင် တားဆီးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ၄င်းက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ဌာနလေးခုတွင် အရာရှိနှင့် ၀န်ထမ်းစုစုပေါင်း ၃၁၃၄ ဦးရှိပြီး ဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် ၀န်ထမ်းစုစုပေါင်း ၅၁၁၁ အထိ တိုးချဲ့ခန့်ထားသွားမည်ဟု သိရှိရသည်။
လတ်တလော ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းသို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး မသန့်ရှင်းသော ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသည့် စားသုံးဆီများ၊ အရက်တု၊ ကြက်ဥအတုအပါအ၀င် စားသောက်ကုန်နှင့် ကုန်စည်များစွာ ၀င်ရောက်လျက်ရှိပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း စံချိန်စံညွှန်းမီသော စားသောက်ကုန်နှင့် ကုန်စည်များ ပြည်သူများ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းကင်းသုံးစွဲနိုင်ရေး လွှတ်တော်က အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
“လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာ ကြက်ဥအတု၊ အရက်တု၊ စံမမီတဲ့ စားသုံးဆီတွေကိစ္စ အရေးတယူဆောင်ရွက်ဖို့ အစိုးရကို တိုက်တွန်းတဲ့အဆိုတွေကို လွှတ်တော်အမတ်တွေ အကုန်လုံး တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ပြီး အတည်ပြုခဲ့တာရှိတယ်။ လွှတ်တော်က ဒါကို အလေးထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူု့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ဆိုသည်။
ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်များကို အဓိက တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ခဲ့သော ဌာနတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိပ်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကိုသာ စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လေ့ရှိသည်။
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်မြေ ကျပ်သိန်းသောင်းချီ ဈေးတက်ဘာလဲဟဲ့ ဒီဂျစ်ဆဲလ်ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သမဝါယမစနစ် ဆိုရှယ်လစ်ကို ပြန်အသက်သွင်းတာလားမန္တလေး ဘီယာလုပ်ငန်း အသိမ်းခံခဲ့ရမှု အတွက် နစ်နာကြေး တောင်းမည်ရန်ကုန် စတော့အိပ်ချိန်း လာတော့မည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ko pyi chit November 2, 2012 - 2:54 pm	Hope, new department require really function otherwise food products will be high price again due to one more department for corruption.
Suggest myanmar FDA should inspect import Palm oil by ship before discharging palm oil to shore tanks.
Welcome for changing.
Reply	ရာဇာ November 2, 2012 - 5:57 pm	FDA က ဝန်ထမ်းတွေတော့ ထီပေါက်ပြီ လို့ ယူဆပြီး ပျော်နေကြ မှာဘဲ…လာထား ကင်းလွတ်ခွင့် တစောင်..ကျပ် ######. သိန်း…ငွေမမျှော်ဘဲ တာဝန်သိသိ နဲ့ လုပ်ပေးကြ မယ် ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်လွန် တံခွန်နဲ့ ကုက္ကား ပါခင်ဗျား…စောင့်ကြည့် ကြစို့….ကိုင်း…ရွာစားရေ….မတိန်းမစောင်း ရအောင်လို့ ဗိန်းဗောင်းလေး နဲ့ ပို့ကြစို့ ရဲ့…..
Reply	rain November 4, 2012 - 8:08 pm	ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှိရမည်….။
Reply	July Born December 19, 2012 - 3:41 pm	ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်များကို အဓိက တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ခဲ့သော ဌာနတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိပ်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကိုသာ စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လေ့ရှိသည်။